အဘိုးအဘွား၂ဝဝ ဦးကို On Doctor Home Call မှ တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ဆေး အခမဲ့ ထိုးပေး - Yangon Media Group
မိုးရာသီတွင် အဖြစ်များသည့် တုပ်ကွေးရောဂါ မဖြစ်ပွားအောင် အဘိုး၊အဘွား ၂ဝဝ ဦးအား တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ဆေးအခမဲ့ထိုးနှံပေးခဲ့ကြောင်း On Doctor Home Call မှ သိရသည်။ အဆိုပါကာကွယ်ဆေးများကို ဖုန်းဆက်လိုက်ရုံဖြင့် ရန်ကုန် မြို့အတွင်း အိမ်တိုင်ရာရောက် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေ သော OnDoctor Home Call နှင့် SML Advcance Laboratory တို့ပူးပေါင်းပြီး မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ်ရှိ Little Sister(Home For the Aged) တွင် နေထိုင်သော အဘိုး၊ အဘွားများကို ဧပြီ ၂ဝ ရက်တွင် ထိုးနှံပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”မိုးရာသီဆိုရင် ဖျားတာ၊နာတာတွေဖြစ်တတ်တယ်။ အထူးသ ဖြင့်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ အဘိုး၊ အဘွားတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးထားရင် ဖျား တာ၊ နာတာတွေကို တားမြစ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ (ဧပြီ ၂ဝ ရက်)နံနက် ၉ နာရီကနေ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအထိ အဘိုး၊ အဘွား ၂ဝဝ ဦးကို တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ် ဆေးအခမဲ့ထိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ SML ကဆေးတွေအခမဲ့ပေးတယ်။ ကျွန် တော်တို့ OnDoctor Home Call ကဆရာဝန်တွေက ကာကွယ်ဆေး လိုက်လံထိုးပေးခဲ့ပါတယ်”ဟု On Doctor Home Call မှ Operation Team Leader ဒေါက်တာ ပြည့်စုံကပြောသည်။ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းမသွားနိုင် သည့်လူနာများ၊ သက်ကြီးရွယ်အို အဘိုး၊ အဘွားများအတွက် ဖုန်း တစ်ချက်ဆက်ရုံဖြင့် အိမ်တိုင်ရာ ရောက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု ပေးရန်ရည်ရွယ်ပြီး On Doctor Home Call ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”အချို့အထပ်မြင့်တိုက်ခန်း တွေမှာ နေထိုင်တဲ့အဘိုး၊အဘွား တွေနဲ့ နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့သူ တွေကဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်းကို မ သွားနိုင်ကြတော့ဘူး။ ခက်ခဲတာ တွေရှိတယ်။ တချို့လူနာတွေကျ တော့ မသွားနိုင်၊ မလာနိုင်တော့ဘူး။ အဲဒီလိုမျိုး လူနာတွေအတွက် အိမ် တိုင်ရာရောက်ကျန်းမာရေးဝန် ဆောင်မှုတွေကို ကျွန်တော်တို့အ ဖွဲ့ကပေးပါတယ်။ ဝန်ဆောင်ခ တော့ ကျွန်တော်တို့ယူပါတယ်။ နောက်အွန်လိုင်းအခမဲ့ကျန်းမာ ရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးပါ တယ်။ Application တွေကို Download လုပ်ထားရင် အခမဲ့ ဖြေကြားပေးတာတွေရှိပါတယ်”ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။
ယင်းကျန်းမာရေးဝန်ဆောင် မှုအဖွဲ့အနေဖြင့် ကာကွယ်ဆေးများကို လုပ်ငန်းတွင်း၊ ကျောင်းတွင်း၊ ကုမ္ပဏီတွင်း အစုလိုက်ကာကွယ် ဆေးထိုးခြင်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းနှင့် အိမ်တိုင်ရာရောက် ကျန်းမာရေးဝန် ဆောင်မှုကို ဦးနှောက်နှင့်အာရုံ ကြော၊ ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်၊ အ ထွေထွေရောဂါ၊ ခွဲစိတ်၊ ကလေး၊ အရိုးနှင့်ထိခိုက်ရှနာခွဲစိတ်များ၊ ကင်ဆာ၊ ဓာတ်မှန်ဆိုင်ရာ၊ မေ့ ဆေး၊ စိတ်ရောဂါအစရှိသော အ ထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ၊ မိသားစု ဆရာဝန်များ ကိုယ်တိုင်လာရောက် ကြည့်ရှုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကြံခုတ်ရာသီတွင် တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ ကြံခုတ် သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ များပြားနေသော်လည်း လုပ်?
လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီနှင့် အိုအိုင်စီ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ လွန်လွန်းနေပြီလားဟု အထူးကော်မရှ??